D2M / DG3M Mpempe anya mpịakọta mpịakọta igwefoto 3D usoro nhazi usoro ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Egwurugwu
D2M / DG3M bụ igwefoto igwefoto dị elu nke mepụtara site na Rainpoo dabere na nzaghachi ndị ahịa na mkpa yana dabere na ngwaahịa usoro kpochapụwo (D2 / DG3). Egwuregwu na DJI M300 RTK, ọ nwere ike nweta 1: 500 (ziri ezi n'ime 5cm) nyocha cadastral na-enweghị GCPs.
Typesdị igwefoto abụọ a na-aga n'ihu na uru nke ịdị arọ, obere nha, ezi uche dị na ogologo na mmezi dị ala nke ngwaahịa ndị a ma ama. Ha na-emekwa ka arụmọrụ nke nbudata data na ime mgbanwe maka ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Ọ bụghị naanị maka M210 / M300 usoro UAV, mana enwere ike iburu ya na ọtụtụ multi-rotor / UAVs ofu iji rụọ ọrụ ọzọ. (D2M na-emetụta naanị UAV multi-rotor).
QTY nke Lens 5pcs
Pixels dị irè 24.3MP (otu oghere) / 120MP (na mkpokọta)
Ogologo oge 25mm (Vetikal) / 35mm (Oblique)
Nha 145 * 145 * 87.5mm
Ibu ibu 780g
Size mmetụta APS-C, 23.5 * 15.6mm
Ngosipụta nkeji ≥0.8s
Anya Mgbidi 45 ogo
Ịnye ọkụ Ike SkyPort nwere ike
Nchekwa 640GB * 2
Nbudata nbudata data ≥300M / s
Ọnọdụ okpomọkụ -10 Celsius C ~ + 50 Celsius